Muuri News Network » Mareykanka oo weeraradii Washington iyo New York dusha u saariyay Sacuudiga..
Mareykanka oo weeraradii Washington iyo New York dusha u saariyay Sacuudiga..
Mudaneyaasha Aqalka sare ee Senete-ka dalka Mareykanka ayaa ansixiyay Hindise sharciyeed dhigaya in dhibaneyaashii waxyeellada kasoo gaartay weeraradii 11-ki September, 2001-di lagu qaaday Mareykanka ay dacwado kusoo oogi karaan dowladda Saudi Arebia.
Xeerkaan oo shalay la meel mariyay ayey boqortooyada Sacuudiga si weyn uga carootay isla markaana gaashaanka ku dhufatay, iyadoo beenisay in ay wax lug ah ku leedahay weeraradaasi mudo 15 sano ah ka hor lagu burburiyay daarihii Ganacsiga aduunka iyo xarunta gaashaandhiga ee Pentagonka Mareykanka.
Ururka Al qaacida ayaa xiligaas sheegtay masuuliyadda weeraradaasi oo loo adeegsaday diyaarado rakaab ah.
Ehelada dadkii ku dhintay weeraradii Washington iyo New York ayaa hada wixii ka dambeeya awood u leh in ay maxkamad la tiigsadaan cid kasta oo ay u arkaan in ay dhaqaale ku bixisay ama gacan ka geysatay weeraradaasi.
Tallaabada ay mudaneyaasha aqalka Senete-ka ku meel mariyeen sharcigaasi ayaa waxaa si aad ah uga soo hor jeestay madaxweyne Barack Obama iyadoo Aqalka Cad ee looga Arrimiyo Mareykankana uu ku goodiyay inuu isticmaali doono codka awooda qayaxan ee loo yaqaano Vito Power.
Af hayeenka Aqalka Cad Josh Earnest, ayaa sheegay in Madaxweyne Obama uu wali ku sii taagan yahay mowqifka uu uga soo hor jeedo xeerkaan xitaa hadda oo la ansixiyay kadib.
Dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee Dowladda Saudi Arebia Adel al-Jubeir, ayaa sheegay in wadankiisa uu arrintaan ka soo hor jeedo isagoo ku saleynayo ilaalinta xiriirada caalamiga ah ee ka dhexeeya Sacuudiga iyo wadamo kale.